Arimaha Bulshada – Page 2 – SHABAKADA HIIRAAN XOG
SAWIRO:- Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa maanta xariga ka jaray Dhismayaasha loogu tala galay in ay ku shaqeeyaan qaar kamid ah Wasaaradaha maamulka Jubbaland.
17/02/2019 B M 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xariga ka jaray Dhismayaasha loogu tala galay in ay ku shaqeeyaan qaar kamid ah Wasaaradaha Dowlad Goboleedka Jubbaland. Dhimayaashan oo loo dhisay qaab casri ah […]
Kulan udhaxeeyo madaxda dowlada oo ka socda Vila Soomaaliya
Hiiraan Xog, Kulan deg deg ah oo Albaabada u xiranyihiin ayaa hadda waxa uu madaxtooyada Villa somalia uga socdaa Madaxda dalka ugu sarreysa kaasi oo looga arinsanaayo jawaabta ugu habboon ee somalia ay qaadan karto. […]
Ciidamada Puntland oo Howlgal ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyey Buuraha Cal Madow
Hiiraan Xog, Ciidamada amniga dowlad Goboleedka Puntland ee PSF ayaa howlgal ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan Buuraha Cal Madow ee maamulkaasi. Puntland ayaa sheegtay in howlgalkaasi ay uga hortageen weerar kaga […]
Danjire Tarsan oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Danjiraha Somaliya u fadhiyay dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, kadib markii Dowladda Kenya ay ka soo eriday dalkeeda. Kenya ayaa xiriirka dhanka Diplumaasiyadda u jartay Somaliya, kadib markii […]
AKHRISO:- Somaliland oo jawaab kulul ka bixisay hadal ka soo yeeray Wasiir ka tirsan Xukuumada Soomaaliya
Hiiraan Xog, Wasiirka Warfaafinta Maamulka Somaliland C/raxmaan C/laahi Guri-barwaaqo ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka waxbarashada xukuumada Soomaaliya Cabdilaahi Goodax bare oo ahaa in guddi uu madax ka yahay ay ka shaqeynayaan inay […]
AKHRISO:- Dowlada Kenya oo faahfaahin ka bixisay sababaha keenay iney xiriirka u jarto Soomaaliya
16/02/2019 B M 0
Hiiraan Xog, War-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada arrimaha dibeda ee dowladda Kenya ayaa lagu cambaareeyay falkii ay dowlada Soomaaliya iibka u gelisay ceelal shidaal oo ku yaalla xuduud badeedka ay labada dal ku muransan yihiin […]
Kenya oo u yeertay Safiirkeeda u fadhiya Soomaaliya
Hiiraan Xog, Dowlada Kenya ayaa u yeeratay safiirkeeda Soomaaliya Lt. Gen. Lucas Tumbo , isla markaana amartay in dalkeeda uu isaga baxo safiirka Soomaaliya, arintan ayaa ka dambeysay Kenya oo ku doodaysa in Soomaaliya “ay […]
Dowlada Kenya oo ceyrisay Safiirka dowlada Soomaaliya
Hiiraan Xog, Dowladda Kenya ayaa u yeeratay safiirkeedii ka joogay magaalada Muqdisho, waxayna amartay safiirka Soomaaliya ee magaalada Nairobi inuu dalkeeda isaga baxo. Amarkan ayaa goor dhoweyd kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya, sida shaacisay […]
DAAWO VIDEO:- Mashaariic laga hirgaliyay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan
Hiiraan Xog, Degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa la hirgaliyay mashaaric isugu jirta dib u dhiska iskuulada iyo xarunta degmada Matabaan iyo Saldhiga ciidanka Booliska degmadaas. Dadka ku dhaqan degmada Matabaan ayaa ka mahadciliyay mashaaricdaan […]